Training Courses – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
MOHT COVID-19 Resilience Package (1) Tourism Capacity Building for Tourism Related Grassroots Personnel ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု (အခြေခံ) သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရန် ကြေငြာခြင်း
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု (အခြေခံ) သင်တန်းများကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီး၌ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု (အခြေခံ) သင်တန်းများတွင် Communication and Introduction of Foreign Language Module, Service Attitude Module, Health and Hygiene Module, Safety and Security Module များ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိ ခရီးစဉ်ဒေသများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြသော အခြေခံလူတန်းစားများဖြစ်သည့် အနှေးယာဉ် ဆိုက်ကားဆရာများ၊ မြင်းလှည်းဆရာများ၊ အငှားယာဉ်မောင်းသူများ၊ စက်လှေမောင်းသူများ၊ ခေါင်းရွက်ဗျတ်ထိုးဈေးသည်များ၊ လက်မှုပညာသည်များ တက်ရောက်နိုင် ပါသည်။
သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ်လျှင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ၂ ရက်နှုန်းဖြင့် ၄ ပတ်၊ ၈ ရက်ကြာ သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်တန်းများကို COVID-19 Lockdown အလွန်ကာလ(ခန့်မှန်း ဇွန်လဆန်း) တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားရန် လျာထားပါသည်
သင်တန်းကြေး သုံးသောင်းကျပ်ကို ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန COVID-19 Stimulus Package မှ ကျခံပေးမည့်အပြင် သင်တန်းတက်ရောက်မည့် သင်တန်းသားများအား သင်တန်းကာလအတွင်းတစ်ရက်လျှင် ၄၈၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အပတ်စဉ်တစ်ခုတွင် သင်တန်းသား ၂၀ ဉီးဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးနှင့် ပုဂံ တို့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူ အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများသို့ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
သင်တန်းသားရွေးချယ်မှုကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ခရီးစဉ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ရာ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် မိမိတို့လုပ်ကိုင်ရာဒေသအလိုက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ရုံးခွဲများ၊ ခရီးစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်အသင်းများထံလိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Online မှ လျှောက်ထားရန်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု (အခြေခံ) သင်တန်းများအတွက် လျှောက်လွှာကို ဤနေရာတွင် (သို့မဟုတ်) အောက်ပါ QR Code Scan ဖြင့် Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီးလျှင် covid.rp1@gmail.com သို့ပေးပို့ပါရန်။
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (မွမ်းမံ) သင်တန်းများကို ဟိုတယ်ဇုံ အသီးသီး၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအမျိုးအစားများမှာ Front Office Operation, Housekeeping, Food & Beverage Services, and Hotel Reservation သင်တန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ ရက်သတ္တပတ် ၁ ပတ်လျှင် တနင်္လာမှ သောကြာအထိ (၃) ပတ်ကြာ (၁၅) ရက်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပြီး သင်တန်းများကို COVID-19 Lockdown အလွန်ကာလ (ခန့်မှန်း ဇွန်လဆန်း) တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ရန်လျာထားပါသည်။
လက်ရှိဟိုတယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများ၊ ယခင်က ဟိုတယ်များတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောအထောက်အထားရှိပြီး လက်ရှိ တွင် အလုပ်အကိုင် လက်လွတ် ဆုံးရှုံးထားသော ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
သင်တန်းကြေး ခြောက်သောင်းကျပ်ကို ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန COVID-19 Stimulus Package မှ ကျခံပေးမည့်အပြင် သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သင်တန်းသားများအား သင်တန်းကာလအတွင်း တစ်ရက်လျှင် ၄၈၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အပတ်စဉ်တစ်ခုတွင် သင်တန်းတစ်ခုလျှင် (၁၀)ဦးနှုန်း သင်တန်းသား ၄၀ ဉီးဖြင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူ အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ ကျန်ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများသို့ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
သင်တန်းသားရွေးချယ်မှုကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ခရီးစဉ်ဒေသစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းများ သက်ဆိုင်ရာဇုံအလိုက် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင် များအသင်းနှင့်ပူးပေါင်းရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ရာ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (မန္တလေးရုံးခွဲ) တို့တွင် မိမိတို့လုပ်ကိုင်ရာ ဇုံ အလိုက် ဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းထံ လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ဟိုတယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု သင်တန်းများ(မွမ်းမံ)အတွက် လျှောက်လွှာကို ဤနေရာတွင် (သို့မဟုတ်) အောက်ပါ QR Code Scan ဖြင့် Download ရယူဖြည့်စွက်ပြီးလျှင် covid.rp2@gmail.com သို့ပေးပို့ပါရန်။
TRAININGS IN MAY 2019
Subject : Assistant Cook
Starting Date: 6th May
Time : Monday to Friday (9:00 AM to 12:00 PM)
Place : Tourism and Hospitality Training Centre THTC (Yangon)
Contact Info : https://www.facebook.com/thtctourism/
Subject : Certificate I in Hospitality
Time : Monday to Friday (9:00 AM to 4:00 PM)
Subject : Certificate II in Hospitality
Subject : Food & Beverage Service (Basic)
Time : Monday to Friday (8:00 AM to 12:00 PM)
Subject : Hospitality Course (Batch 1)
Starting Date: 6th May – 21st June
Time :5days\_week (210 hours)
Place : Swisscontact Partners Hotels in Yangon, Nay Pyi Taw, Mandalay and Bagan (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel, Hotel Bo Bo Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hotel, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)
Application form :HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature
Contact Info: Swiss Development Cooperation, Mobile: +959255725 669|
Office: +959892 507 300, www.swisscontact.org
Subject : Front Office Level 1
Subject : Regional Tour Guide (Basic)
Starting Date: 6th May – 31st May
Time : Monday to Friday (9:00AM to 5:00 PM)
Place : Hpa-an, Kayin State
Contact Info : Directorate of Hotels and Tourism, Hpa-an branch Office,
Ph: 058-21075, hpaanmoht@gmail.com
Subject : Supervisory Management I
Starting Date: 14th May
Time : Tue, Wed (9:00 AM to 5:00 PM)
Application : HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature
TRAININGS IN JUNE 2019
Subject : Basic Tour Guide Training Course No. (59)
Application Date : 8th April to 3rd May (10: 00 AM to 3:00 PM)
Exam Date : 12th May (Written Exam) 13th -15th May (Oral Test for other languages speaking guide)
Training duration : 10th June to 3rd September 2019
URL : https://www.facebook.com/thtctourism/
Tour Guide Training: Guide Application Form (PDF)
To understand the rules and regulations of tourism
To be aware of the principles and ethics thatatour guide must follow
To be able to provide the high-quality guide service
To raise consciousness in preserving religious and cultural heritage
To understand the departmental functions related to tourism business
To understand the terms and conditions related to tourism business
To raise awareness in environmental conservation
To understand architecture and archaeological subjects
To understand Myanmar literature and culture as well as to enhance the patriotic mindset
To understand the traditions and customs of ethnic groups
Must submit recommendation letters from the police station and ward administrator.
Must submit recommendation letter (Physical and Mental) fromaRegional Health Department
Must be proficient in at least one language.
Must be at least 20 years old and haveaNational Registration Card.
Must be interested in tourism.
Address: No. (458-460), Yathar Condo 2nd floor,
At the corner of 31st Street and Maharbandoola Street,
Pabeden Township, Yangon.
Phone Number: 01-380621, 01-373792, 01-375194
Subject : Basic English and Computer Course
Starting Date: 3rd June 2019-28th June 2019
Time : (10:00AM-12:00AM- English, 14:00-16:00- Computer)
Place : Mindat, Chin state
Contact Info : Directorate of Hotels and Tourism, Mindat branch Office, Ph: 070-70389
Starting Date: 8th July 2019-23rd Aug 2019
Application :HT _Application form_MMR _2019_Learner v1.3 Mature
Place : Swisscontact Partners Hotels in Kyaikto, Dawei, Myeik and Kawthaung (Popular Hotel, Golden Bliss Hotel, Pepper Garden Hotel, Grand Jade Hotel, Myint Mo Hotel, Regent Hotel, Zayar Htet San Hotel, Golden Guest Hotel, Hotel Dawei, Victoria Cliff Hotel, Grand Andaman Hotel)
Contact Info : Swiss Development Cooperation, Mobile: +959255725 669| Office: +959892 507 300, www.swisscontact.org
Subject : Hospitality Course (Batch 2)
Starting Date: 8th July 2019-23rd July 2019
Place : Swisscontact Partners Hotels in Yangon, Nay Pyi Taw, Mandalay and Bagan (Great Wall Hotel, M Gallery, Myat Taw Win Hotel, Horizon Lake View Hotel, Hotel Bo Bo Min, Cherry Hills Hotel, Hotel M, Pleasure View Hotel, My Hotel, City Hotel, Hotel Azure Accord Hotel, Sakura Princess Hotel, Rupar Mandalar Hotel, Mandalay City Hotel, Hotel Mandalay, Great wall Hotel(Mandalay), Ice Land Hotel, Hotel Dingar, Yadanabon Dynesty Hotel, Ayarwaddy River View Hotel, Famous Hotel 1, Famous Hotel 2, Bagan Sense Hotel, Bagan Ayar River View Hote, Araindamar Hotel, We Stay @ Bagan Lotus Hotel)
TRAININGS IN SEPTEMBER 2019
Starting Date: 9th Sep – 25th Oct
Subject : Hospitality Course (Batch 3)
Trainings in November 2019
Subject : Housekeeping (Short Course)
Starting Date : 18th Nov 2019
Time : 12:30 PM to 3:30PM (Monday to Friday)
Training Fee : 35000 MMK
Trainee Limitation : 25 Trainees
Trainee qualification : Over 16 years old Middle Education (Grade9pass )
Educational Recommendation ( Grade9pass ) NPR card copy
Info URL :https://www.facebook.com/myanmarinstituteoftourismandhospitality/
Contact Details : Center for Touirism Development (CTD)
Subject : Front Office Operation (Short Course)
Trainee qualification : Over 16 years old
Middle Education (Grade9pass )
Educational Recommendation ( Grade9pass )NPR card copy
Subject : Food and Beverage Service (Short Course)
Announcement for COVID Packages
Announcement for package 1
Announcement for package 2
Announcement for package 3
Announcement for package 4
Announcement for package 5
Announcement for package 6